Umshini ophakamisa abakhiqizi nabahlinzeki | China Umshini ophakamisa umshini Factory
Umshini ophakamisa umshiniungomunye wemikhiqizo yethu ebaluleke kunazo zonke yokuthengisa efaka i-vacuum galss ophakamisa, ipuleti ye-vacuum lifter nabanye i-vacuum lifter njalonjalo. Isisetshenziswa sisebenzisa ukulawulwa kwesistimu okubili, iqembu elilodwa le-vacuum system liyasebenza, futhi iqembu elilodwa lilindile. Yamukela impompo yokuphefumula yaseMelika i-THOMAS DC, isondo lokushayela elisindayo lase-Italy iMETALROTA, iSwitzerland BUCHER esiteshini samaphampu wokubhoboza kanye nebhethri elingenalondolozo kuphela. Ngesikhathi sokusetshenziswa, ukuhamba ngogesi, ukuphakamisa ugesi nokudonsa kagesi kungabonakala ngaphandle komthombo womoya wangaphandle noma ukunikezwa kwamandla. , Ukuzungezisa ngesandla ama-degree angama-360, i-manual flip 90 degrees neminye imisebenzi.
Umshini wethu wokugcoba ingilazi usetshenziselwa ukufakwa nokuphathwa kwengilazi, kepha ngokungafani nabanye abakhiqizi, singamunca izinto ezahlukahlukene ngokufaka izinkomishi zokudonsa. Uma izinkomishi zokudonsa izipanji zishintshwa, zingamunca amapuleti ezinkuni, usimende kanye nensimbi. .
Umnyango weglasi wasendlini unetrolley yokuncela inkomishi, ukuncela kagesi kanye ne-deflation, ukuphakamisa ngesandla nokunyakaza, okulula nokusindisa abasebenzi.Lolu hlobo lokudonsa inkomishi trolley libiza kancane kepha lisebenza ngokusebenza kangcono ukuphatha ingilazi kalula.
Indebe kagesi yokudonsa ingilazi iqhutshwa ibhethri futhi ayidingi ukufinyelela kwekhebula, okuxazulula inkinga yokunikezwa kwamandla okungahambi kahle esakhiweni. Ifanele ikakhulukazi ukufakwa kwamakhethini odonga lwengilazi ephezulu futhi ingenziwa ngezifiso ngosayizi
I-DXGL-HD yohlobo lwengilazi yokudonsa inkomishi isetshenziselwa ukufakwa nokuphathwa kwamapuleti engilazi. Inomzimba olula futhi isebenza kahle ezindaweni ezincanyana zokusebenza. Kukhona uhla olukhulu lwezinketho zokulayisha phakathi kwamamodeli ahlukahlukene, angahlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokunembile kakhulu.
Vele, ukujikeleza okwenziwa ngesandla kanye ne-flip yesandla kungafakwa ukujikeleza kagesi noma i-flip. Le robhothi yenkomishi yokudonsa inamandla aqinile nokuphakamisa okuzinzile. Ifakwe i-Japanese PANASONIC digital display vacuum pressure switch ne-battery gauge gauge, engahlola ngokusobala ukusebenza okuphephile kwemishini. Uhlelo lokunxeshezelwa kwengcindezi yomshini owakhelwe ngaphakathi luqinisekisa ukuthi lonke uhlelo lokuhlanza lugcinwa ngenani lengcindezi eliphephile njalo lapho kuphathwa ingilazi. Ngemuva kokwehluleka kwamandla ngengozi, umsebenzi wokubamba ingcindezi unganweba isikhathi sokucubungula esiphuthumayo futhi usisebenzise ngokuphepha. Idizayini eguquguqukayo iyamukelwa. Ingabuthwa ngezindlela ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo, iguqule ukuma kwezinkomishi zokudonsa futhi inkomishi ngayinye yokudonsa ifakwe i-valve ehlukile yokulawula, engancela izinhlobonhlobo nobukhulu bengilazi.